Yekupedzisira Chance Yekunyora Martech Zone
Muvhuro, June 16, 2008 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Kutarisira kumberi kutaura nehama neshamwari dzakanaka, kusanganisira Kyle Lacy, pano muIndipolis mangwana mangwana pamusangano: Online Social Networking yeIwe neBusiness Rako.
Mangwanani achatanga na: Nei masocial network ari mafomu ane simba ekutaurirana ebhizinesi uye ndeapi masocial network akanakira bhizinesi rako uye zvinangwa zvako yakapihwa naSarah “Intellagirl”Robbins.
Kuchengetedzeka uye Kuchengeteka - Ndeipi nhanho yekuchengeteka uye chengetedzo yauinayo pasocial network?
Kuchengetedza Chako Brand - Unoita sei kuti uchengetedze zita rako pasocial network? Unozviona sei?
Yemukati Yemagariro Networks - Mashandisiro ekushandisa masocial network kugadzira hurukuro pakati pevashandi vako vemukati?
Online Impact - Maitiro ekuyera kukanganisa kwekushambadzira munharaunda yepamhepo uye chii icho chingakuudze iwe?
Social Networks uye Imwe Midhiya - Unobatanidza sei masocial network nevamwe vezvenhau?
Maoko paSession - Gadzira yako wega pasocial network nerubatsiro rweMediaSauce vashandi.
Zuva richavhara nehurukuro yepaneru, Kudzivirira Mukurumbira Wako Pamhepo. Kana iwe uchida kunyoresa, iwe zvakanaka tora chako chigaro mune giya!